ChildCoin စျေး - အွန်လိုင်း CHILD ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို ChildCoin (CHILD)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ ChildCoin (CHILD) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ ChildCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
CHILD – ChildCoin
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ ChildCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
ChildCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
ChildCoinCHILD သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00866ChildCoinCHILD သို့ ယူရိုEUR€0.00735ChildCoinCHILD သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00662ChildCoinCHILD သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0079ChildCoinCHILD သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0774ChildCoinCHILD သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0547ChildCoinCHILD သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.192ChildCoinCHILD သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0323ChildCoinCHILD သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0115ChildCoinCHILD သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0121ChildCoinCHILD သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.192ChildCoinCHILD သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0671ChildCoinCHILD သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0465ChildCoinCHILD သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.649ChildCoinCHILD သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.1.46ChildCoinCHILD သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0119ChildCoinCHILD သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0133ChildCoinCHILD သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.27ChildCoinCHILD သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0602ChildCoinCHILD သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.925ChildCoinCHILD သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩10.28ChildCoinCHILD သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦3.36ChildCoinCHILD သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.636ChildCoinCHILD သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.238
ChildCoinCHILD သို့ BitcoinBTC0.0000008 ChildCoinCHILD သို့ EthereumETH0.00002 ChildCoinCHILD သို့ LitecoinLTC0.000159 ChildCoinCHILD သို့ DigitalCashDASH0.0001 ChildCoinCHILD သို့ MoneroXMR0.0001 ChildCoinCHILD သို့ NxtNXT0.676 ChildCoinCHILD သို့ Ethereum ClassicETC0.00128 ChildCoinCHILD သို့ DogecoinDOGE2.5 ChildCoinCHILD သို့ ZCashZEC0.000105 ChildCoinCHILD သို့ BitsharesBTS0.267 ChildCoinCHILD သို့ DigiByteDGB0.277 ChildCoinCHILD သို့ RippleXRP0.0308 ChildCoinCHILD သို့ BitcoinDarkBTCD0.000299 ChildCoinCHILD သို့ PeerCoinPPC0.0287 ChildCoinCHILD သို့ CraigsCoinCRAIG3.95 ChildCoinCHILD သို့ BitstakeXBS0.369 ChildCoinCHILD သို့ PayCoinXPY0.151 ChildCoinCHILD သို့ ProsperCoinPRC1.09 ChildCoinCHILD သို့ YbCoinYBC0.000005 ChildCoinCHILD သို့ DarkKushDANK2.78 ChildCoinCHILD သို့ GiveCoinGIVE18.76 ChildCoinCHILD သို့ KoboCoinKOBO1.97 ChildCoinCHILD သို့ DarkTokenDT0.00798 ChildCoinCHILD သို့ CETUS CoinCETI25.02
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Fri, 14 Aug 2020 10:55:02 +0000.